Isiphi isibonakaliso okufanele sishade neLibra? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Isiphi isibonakaliso okufanele sishade neLibra?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - ILibra Aug '13 Horoscope
Okuhambisana kakhuluizimpawungeILibrangokuvamile kubhekwa njengeGemini, uLeo, iSagittarius ne-Aquarius. Okungenani okuhambisanayoizimpawungeILibrangokuvamile kubhekwa njengeCancer neCapricorn. Ukuqhathanisa ilangaizimpawuinganikeza umbono omuhle wokuhambisana.
Yamukela esinye isikhathi ohlangothini olungaqondakali lwe-Beast Zone. Lapho sibheka khona kumkhathi ukuze usitotose ngolwazi lwayo lwe-zodiac. Siyabona ukuthi unemibuzo mayelana nobunye bobudlelwano bakho, othandekayo uBeast-Viewer, futhi namuhla kuzoba ukuxhumana kwakho nezinkanyezi.
Ubani ongamethemba ngempela? Ubani okufanele uhlale kude naye nezinye izimpawu zomkhathi othi, njengoba uzama kanzima, abasoze baba abangane bakho beqiniso. Hlala ubhekile sizothola. Ngaphambi kokuthi i-cosmos inikeze impendulo oyifunayo, qiniseka ukuthi ushaya ukubhalisa bese ushaya inkinobho yesaziso ukuze ungaphuthelwa yimibhalo emisha, futhi ungakhohlwa ukuxhasa isiteshi sethu ngokubuka le ndatshana kuze kube sekupheleni.
ARIES // UMLILO Ungunombolo eyodwa ku-zodiac ngesizathu sama-Aries. Uyakuthanda ukuba ngumholi futhi uhlale ubheke inombolo ye-1. Njengesibonakaliso somlilo, ungumuntu onentshisekelo onobuhlakani obukhulu futhi ozethembayo.
Kodwa-ke, ungaba nesineke kancane futhi ube nomunyu lapho uneTaurus eyaziwa ukuthi inesisisekelo esihle futhi yenza ikhal. I-Taurus yaziwa ukuthi ivame ukuqeda ubudlelwano lapho ingenampilo, futhi izobe ingahambisani nezinqumo zayo. Kuwe, amaCancer angaba nobungane obunzima.
I-Taurus // EARTH Taurus, uyathanda ukuzungezwa ubuhle nabangane abahle. Uyakwazi okufunayo futhi unamathele kukho. Ungokoqobo futhi unekhwalithi enhle yokuba umngane oqotho kakhulu.
Kepha uma kukhulunywa ngobungani bakho, iwele eliguquguqukayo kungenzeka kube umuntu ofuna ukumgwema. I-Taurus ithanda ukuphatha, futhi uphawu lwe-zodiac iGemini lwaziwe ngokushintsha umqondo walo njalo. Futhi Taurus othandekayo, njengoba sishilo ekuqaleni, cishe awusoze waba nesikhathi esihle ngophawu lwe-Aries noma.
GEMINI // AIR Gemini, ungumuntu othanda ukwazi! Uyashesha ukuqonda futhi unenhlalo ngokwedlulele futhi uyaxhumana. Uyaziwa ngokuhlala ukulungele ukuzijabulisa, kepha futhi ungathola ukuphumula endaweni okuyo ngokushesha okukhulu. Okuxakayo-ke ukuthi kuzoba nzima kuwe uZeitge Virgo angashiyi lutho ngengozi futhi kaningi unamahloni kakhulu.
Isimo sokulondolozwa kweVirgo asihambelani nobuntu obuphumayo beGemini futhi kungenzeka sibalekele noma yisiphi isimo lapho iGemini ingachuma khona. Zombili lezi zimpawu zezinkanyezi zinobunzima bokuziveza, ngakho-ke noma kunini lapho kuba khona ukungqubuzana noma ukulwa, akukho kulezi zimpawu ezimbili zezinkanyezi okungenzeka ukuthi zithathe isinyathelo sokuqala sokubuyisana. I-CANCER // AMANZI Umdlavuza Ungesinye sezimpawu ezithinta imizwa futhi esibucayi kakhulu se-zodiac.
Uhambisana kakhulu nengaphakathi lakho futhi ungumngane omuhle ngokwemvelo. Ngaso sonke isikhathi ukulungele ukuba nendlebe futhi ube yihlombe umuntu okufanele akhale ngalo. Kepha ngoba uthembeke ngokweqile, ngeke ubathande labo abangaphansi kwakho kakhulu.
I-Sagittarius yaziwa ngokusho noma yini okufanele ithole lokho ekufunayo. I-Sagittarius iwuphawu lomlilo futhi lokho kuzoshayisana ngqo nawe, Cancer, njengoba uzobuswa yizakhi t zamanzi. Umdlavuza uthanda ukuzungeza ngekhaya elijabulisayo eligcwele labo abamthandayo, lapho iSagittarius izohlale ithola isidingo ILEO // AMLILO Amabhubesi aziwa njengabaholi bepakethe; zinamandla futhi zivame ukufeza izinhloso zazo ngokuzola nangokuzethemba.
ILeos yaziwa ngokuzicabangela okuncane, kepha (ngubani ongakusola, uyesabeka)! Uma kukhulunywa ngokwakha ubungane besikhathi eside, uLeos kwesinye isikhathi angalwela ukubamba iqhaza ngenxa yokuziqhenya kwabo. Ngizoqaphela lapho uxhumana nalabo abangaphansi kophawu lwe-Pisces zodiac. AmaPisces abuswa yinto yamanzi kanti wena Leo uphethwe ngumlilo.
Amanzi nomlilo nje azihlangani, futhi umehluko wakho wobuntu uzokhula kangcono kuwe. Ama-pisces awuhlobo lwesibonakaliso esingenzi lutho nolubucayi futhi ukuzimisela kwakho kungenzeka kufinyelele emithanjeni yabo. IVIRGIN // EARTH Virgo, ungaba uphawu olusebenza kanzima kakhulu lwe-zodiac ku-zodiac, futhi leyo yikhwalithi enhle kakhulu! Kepha kwesinye isikhathi kungenza kangcono ukuthi uzinike isikhathi sokudlala nobudlelwano bomuntu siqu! Imvamisa awuqondwa kahle yiVirgo ngoba ukuthola kunzima ukuveza imizwa yakho, kepha uma usuwenze umngani uba nomusa ngokweqile futhi uthembekile.
Nawe uhlakaniphe kakhulu, Virgo othandekayo, okungaholela kwingxabano ye-sanity nobungane be-Aquarius nabo abavame ukuhlakanipha kakhulu. Akulona iphutha lakho uVirgo, abantu base-Aquarius abalangazelela isikhathi futhi bangaba nentukuthelo ngezinye izikhathi // UMOYA Ah, iLibra. Ohulumeni bamazwe.
Kubukeka sengathi ungazwana nawo wonke umuntu! Kepha akukhona lokho kuwa njalo. Libra, waziwa njengesinye sezimpawu zokubambisana nezinhle kunazo zonke kuzodiac, kepha awuyena umlandeli wesigameko. Igama elingukhiye, ufezela.
Ama-Scorpios aziwa njengabantu abanesibindi futhi ngokuvamile ahola izimpilo zenjabulo. AmaScorpios nawo ayaziwa ukuthi ayamangaza kwesinye isikhathi, kanti iLibra ngeke ibekezelele noma yikuphi kwalokhu kuziphatha. SCORPIO // WATER S corpio, umnandi futhi unothando! Uyakwazi ukuveza imizwa yakho futhi ungaba ngumngane wangempela.
Uvame ukudala futhi ube ngumuntu, kepha uthanda ukuba yisikhungo sokunakwa kanye nempilo yephathi. Kunengqondo nje ukuthi kungenzeka ushayisane nesibonakaliso esifana ncamashi nawe, Leo. Bobabili bangabalingiswa abanamandla amakhulu futhi ngeshwa balukhuni ngokulinganayo.
Yize lokhu kufana kwesinye isikhathi kungasho ubungani bangempela, kuvame kakhulu ukuthi laba babili baphikisane futhi baxabane. I-Sagittarius // UMLILO Umnandi kakhulu Sagittarius. Uthanda ukuhlola imvelo futhi uhlangane nabantu abasha.
Ulangazelela inkululeko efana nomunye umuntu futhi awukwazi ukubekezelela ukuboshwa. Njengoba kushiwo ngaphambili, isibonakaliso se-zodiac ongahle ungazwani ngaso sonke isikhathi yilabo abangaphansi kwesibonakaliso se-zodiac Cancer. Umdlavuza kwesinye isikhathi unganamathela ebunganeni, futhi futhi ungavikeleki, iSagittarius engeke ikwazi ukumela.
Ukusikisela okuncane kobugqila nawe, Sagittarius, kuzobuye kube sendleleni futhi. CAPRICORN // EARTH Capricorn uyizwi lokucabanga, unesibopho, uyala futhi usulazi kahle ikhono lokuzithiba. Uzimele ngokweqile futhi kwesinye isikhathi ukuthola kunzima ukwenza abangane.
Uthanda ukufunda kokuhlangenwe nakho, kepha kwesinye isikhathi ungahlangabezana nokwazi okuncane ukuthi labo abangaphansi kwesibonakaliso seLibra ngeke bakubekezelele. Nobabili nisezingeni eliphakeme ngokwedlulele, kepha iLibra ingumphakathi kakhulu futhi ingakuthinta futhi ibonakale iyisiphazamiso, iCapricorn. I-AQUARIUS // AIR Aquarius ungumuntu wokuqala futhi ulwa impi enhle.
Mhlawumbe hhayi njengamawele, uvame ukuba nezinhlangothi ezimbili. Zombili zinamahloni futhi zizolile, kepha futhi zijabule futhi zinamandla! Unekhono lokubona izinhlangothi zombili zohlamvu lwemali futhi kaningi futhi uletha ukuthula kunoma yisiphi isimo. Kodwa-ke, u-Aquarius uyaziqhenya kancane futhi uyakujabulela ukuhlangabezana nalokhu futhi manje, okuphikisa iCapricorn ebhekele nokuqondisayo.
Kungenzeka ungahlali uzwana namaPisces ngaso sonke isikhathi. U-Aquarius onjengawe uzobathola bekhathazeke kakhulu, ngenkathi bengakuthola nawe ukubanda. IZINHLANZI // AMANZI Pisces uyisibonakaliso sokudala nesobuciko! Umnene futhi uhambisana kakhulu nemizwa yakho.
Uyaziwa ukuthi unomusa kakhulu futhi awunabugovu. Zombili izimfanelo ezinhle uma kukhulunywa ngokwenza abangane. Asikho ngempela isibonakaliso sokuthi awukwazi ukusebenzisana, kepha iGemini ingahle ibe ngokweqile kuwe kwesinye isikhathi, ukuthambekela kokungakhululeki ngeGemini enkulu kunokuphila futhi ngokubuyisela iGemini izozama ukwenza wena kumuntu ongeyena.
Futhi manje kubonakala sengathi lokhu kungukuphela kwendawo yonke esinayo namuhla, sibukeli sesilo esithandekayo. Sidinga isikhathi sokuphumula, kepha ngicela ubuye futhi ubuze izinkanyezi imibuzo esha kakhulu ngokuzayo. Ngabe le ndatshana ibuchaze kahle ubudlelwano bakho? Noma unaye umngane owephula konke okukulesi hlu? Yisiphi isibonakaliso esingumngani wakho omkhulu? Sazise kumazwana angezansi!
Isiphi isibonakaliso uLibra athandana naso?
Ama-Aries (Mashi 21 Ephreli 19)
Okuphikisanayo kuheha ukufundwa kwezinkanyezi, yingakho ama-Aries ehola phambili ohlwiniyezimpawuukhangwa kakhuluILibra. Kukhona ukudonsana kwemvelo komunye nomunye, futhi i-chemistry ebonakalayo ingaba namandla.Amakhilogremukumnandi kakhulu ukuba seduze, kanti ama-Aries amayelana nalokho.1. 2020.
Izindlela Ezi-5 Zokwenza Indoda Yelibra Ithandane Nawe. Yebo. Ukubukeka kwakho kubaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokuyenga indoda yeLibra.
Lo mfana uhlale enaka ikhwalithi yezingubo nezicathulo, ezigqokwa ngabesifazane. Ungalokothi weqe ngokweqile ngezimonyo uma ufuna ukuthi indoda yaseLibra ithandane. Ngoba ukhetha konke okungokwemvelo ubuso bakho abukho.
Zizwe ukhululekile ukusebenzisa i-lipstick ne-mascara ukuze nje ugcizelele ukwakheka nokubuka, kepha hhayi ukubukeka njengehlaya elijabulisayo. Indoda yaseLibra ithanda abesifazane abasebenzisa amakha asezingeni eliphakeme namanani abizayo. Uma kukhulunywa ngokuthandana, lokho kwanele ukufafaza entanyeni kabili ukwenza isithombe esihle kuye.
Ungalokothi uthele ibhodlela lonke kuwe. Kuzomxosha kuphela. Mkhombise ubufazi bakho nezocansi kusukela ekuqaleni, khona-ke indoda yaseLibra nakanjani izokhombisa ukukuthakasela.
Okubaluleke kakhulu, nokho, akukhona ukuba ngowesifazane oqhoshayo noqhoshayo. Indlela yesibili yokunqoba indoda yeLibra enhliziyweni yayo ukulungela ushintsho. Akajwayele ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi eside.
Kwesinye isikhathi kuba sengathi uhlala ephuthuma njalo. ILibra inezindaba eziningi ezibalulekile nemihlangano nabangani. Udinga ukuba yingxenye yempilo yakhe futhi.
Ungamangali ukubona ezinye izintokazi eziningi kangaka zikuzungezile nsuku zonke. Ngoba unenhlanhla engajwayelekile eheha abobulili obuhlukile. Indoda yaseLibra izokwethembeka futhi ithembeke kuwe inqobo nje uma uzoyeka ukulawula impilo yakhe futhi ube nomona ngabanye besifazane.
Ama-Virgos, ama-Scorpios, amaBhubesi. Ladies, manje ngiphendukela kini.
Njengezinye izimpawu zezinkanyezi u-Aquarius noGemini, iLibra-Man iyakuzonda ukutshelwa okufanele ukwenze ebudlelwaneni nokuthi umthande kanjani kahle owesifazane. Mvumele nje azizwe enesikhala esikhulu futhi akhombise ukunganaki okuncane. Nakanjani uzozwa sengathi angakulahlekisela.
Inombolo yethiphu 3. Ukwenza indoda yaseLibra ithandane kufanele udlale nayo. Uma wazi ukuthi ungakwenza kanjani, yenza konke okusemandleni akho ngenkathi kungabi yisicefe, uzokuqonda ngokushesha ukuthi ungowakhe Ingabe kufanele ukunakwa.
Khumbula ungalokothi usebenzise inhlamba ngenkathi usebenzisana neLibra.
Ngoba abesifazane abaziphatha kabi futhi abangahloniphi ekukhulumisaneni bahlala belahlekelwa isithunzi sabo emehlweni akhe. ILibra yisibalo sezombusazwe. Ubhekwa njengesinye sezibonakaliso ezihamba phambili zezinkanyezi mayelana nokukhuluma esidlangalaleni nokukhuluma phambi kwabantu.
Ngakho-ke uma ungaqiniseki ngesilulumagama sakho, kungcono ukuthi wehlise umoya, umnikeze ithuba lokuthi akhulume naye nje.
Ngaleyo ndlela, umbonisa inhlonipho yakho bese udlulisa induku. Ngenkathi uLibra engeyena owesilisa okhombisa ngokusobala ukuthi uyabathanda abesifazane, ungamenza adlale indima yokuqala ebudlelwaneni bakho. Ukwenza kanjani lokho? Kulula kakhulu.
Mane uthathe izinyathelo zokuqala naye ezigabeni zokuqala zobudlelwano bakho bezothando ukuze uthole isikhundla esingcono ngokuhamba kwesikhathi. Inombolo yethiphu 4. Ukuze ulondoloze ubudlelwano obuzinzile nalesi sibonakaliso se-zodiac kuyadingeka ukukhulisa intshisekelo yakhe kuwe..ngandlela thile.
Ngisho ... uma unikeza umuntu weLibra ubumnandi obukhulu embhedeni, khona-ke uzobe ukhululekile Ungazuza izinhliziyo.
Kodwa-ke, umuntu akufanele akhohlwe ukuthi lo mfana uyisipiliyoni seqiniso empilweni esondelene. ILibra ithanda ukuhlukahluka nokuhlolwa. Lungela ukudlala umdlalo.
Kepha .. Lo mdlalo kufanele ungalindeleka engxenyeni yakho, ulahlekelwe ngokushesha yileso Sasasa kuye.
Ngakho-ke zama ukuba nzima kuye.
Owesifazane ongaqondakali unamathuba amaningi okwenza indoda yaseLibra ithandane kunowesifazane onekhono elihle lokupheka. Lo mfana uthanda ukuvula ama-horizons amasha ekamelweni lokulala kunokuhlala isisu esigxiliwe phambi kwe-TV naye. Uma ukuqonda lokhu ngokushesha, khona-ke imizamo yakho endleleni yokukhohlisa yeLibra ngeke ibe yize.
Kepha ungacabangi ukuthi uzimisele ngocansi kuphela.
Akulona iqiniso. Ukusondelana naye kuyindlela nje yokukhombisa uthando lwakhe kowesifazane. Uma ungabaza ngezinhloso zakhe ezibucayi ngawe, zibuze nje 'kuyangijabulisa embhedeni'.
Inombolo yethiphu 5. Indlela yokugcina yokuthandana nale ndoda yaseLibra ukugcina ubumsulwa nokuhleleka okuzungezile. Amaphutha wokuziphatha etafuleni, izitsha ezingageziwe - ubaphatha kabuhlungu kuphela.
Ngeke ngithi indoda yaseLibra ingumuntu oqaphile njengeVirgo noma iCapricorn. Kepha iqiniso lokuthi unambitha omuhle wobuhle futhi uthanda izinto ezinhle, lelo yikhulu lamaphesenti aqinisekile ukuthi uzoba nelineni elihle lombhede, umculo ophumuzayo namakhandlela anamakha ekamelweni lakho ...
Njengoba kungenzeka uqagele, le ndoda futhi iyathandana, ukuzwela kwayo, ubuhle bayo kanye nentelezi yayo ekhethekile ihlale imhlukanisa namanye amadoda. Owesifazane onolwazi oluhle angabona kalula umfana weLibra esixukwini kodwa uzokwazi ukumenza avume ukuthandana naye kusengumbuzo..zi kwakuyizindlela ezi-5 ongenza ngazo ukuthi indoda yaseLibra ithandane.
Njengenjwayelo, ungakhohlwa ukungilandela ku-instagram bese ushaya insimbi yesaziso ukuze ilunge ukuze ungaphuthelwa yimibhalo elandelayo
AmaLibra azothola uthando ngeminyaka emingaki?
Wake wahlangana nomuntu owayecabanga ukuthi uyiLibra kanti empeleni uyiTaurus? Yebo, kumele ngabe benze iphutha ngesibonakaliso sakho esinyukayo. Uphawu lwakho olukhulayo luvame ukudlala indima ebalulekile ebuntwini bakho.
Kungumfanekiso umhlaba owubonayo ngawe nomqondo wonke umuntu anawo ngawe lapho uhlangana nabo. Ngakho-ke isebenza kanjani empeleni? Ake sithole ...
Ima kancane! Ngaphambi kokuba ukhohlwe ukuchofoza okuthi Bhalisa bese ushaya insimbi yokwazisa ukuze uhlale usesikhathini ngokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. O, futhi bukela le ndatshana kuze kube sekupheleni ukuxhasa iSilo. Ukuthola kabanzi mayelana Ukuzwa ithonya lesibonakaliso sakho esinyukayo ebuntwini bakho, okokuqala sidinga ukuqonda ukuthi luyini uphawu olukhuphukayo.
Uphawu olukhulayo luphawu lwe-zodiac oluvele empumalanga ngesikhathi uzalwa. Kuyaziwa nangokuthi i-Ascendant futhi njengenyanga noma ilanga nakho kuyingxenye ye-horoscope yakho i-Ascendant ikhona, umbono wakho ku-ot wabo uzohluka. Uma sikhuluma ngokuvelayo, ake siqale uhlu ngenombolo eyodwa ..
Ukuvela kokuqala kwe-Aries Ascendant: Dynamic, Pioneering, Positive kanye nomholi ozelwe, lena yimicabango engase iwele emqondweni womuntu lapho beqala ukuhlangana nawe. Ungaba iScorpio esizolile, iVirgo enamahloni, noma iPisces enamahloni, kepha uma uyi-Aries Yiba nesibonakaliso sakho esikhuphukayo, umbono wabo wokuqala ngawe ungafana nama-Aries anesibindi. Abanye abantu bangakuthola ucindezelekile noma wesabise ekuqaleni, kepha lokhu kuzophela uma sebekwazi kangcono.
Asikwazi ukusho ukuthi ilanga nenyanga yakho nazo zikuphawu olufanayo lwe-zodiac njenge-ascendant yakho, khona-ke ungaba uhlobo lomuntu ovela kwabanye. Ukuvezwa kokuqala kweTaurus Ascendant: Kuhle uma umuntu wakho ophakeme eyisibonakaliso sokuthi uNdlunkulukazi wothando uqobo lwakhe kubuswa khona kulindeleke ukubukeka okuhle. Lapho abantu beqala ukuhlangana nawe bazokuthola umuhle futhi uthandeka.
Abanye bangaze bakubone njengephakethe lonke. Awu, mhlawumbe ucabanga ukuthi kupholile ngempela ukuba ngumuntu okhuphukela eTaurus. Lokho akulungile ngokuphelele.
Njenganoma isiphi esinye isibonakaliso esikhuphukayo se-zodiac, naso sinezinkinga zaso. Isibonelo, abantu abazalwa ngaphansi kwalesi ascendant bangabukwa njengabantu abanenkani ethonyeni le-ascendant yabo ebenza babonakale ngale ndlela. Ngokufanayo, abantu bangabathola bezikhukhumeza futhi.
I-Twin Ascendant Impression First: Abantu abanonya ngalesi ascendant banomoya wengqondo lapho usohambweni, abanye bangacabanga ukuthi nguwe. Kuyithonya leMercury elibusa i-Ascendant. Ungaba amazambane ombhede noma ukuzihlalela, kepha umuntu ophakeme ngeke abukeke kanjalo.
Hlala wedwa, ungahle uthathwe njengononya omncane. Kungeminye nje yezinzuzo zokuba ngumuntu okhuphukela eGemini. O, futhi ungahle uhlekise futhi ubhuqe.
Umdlavuza Wokwenyuka Komdlavuza: Unobubele Ingabe ubukeka njengomuntu onomusa nokhathalelayo? Lokhu kungenxa yesibonakaliso sakho somdlavuza ovelayo. I-Cancer ascendant ijwayele ukufana neCancer inyanga nezimpawu zelanga. Ukubekwa komdlavuza kuvame ukunquma isimo somuntu somzwelo.
UyiCapricorn osebenza kakhulu kepha unaleso sishoshovu bese unecala elingokomzwelo. Abantu bangase futhi babe nomuzwa wokuthi uyanyakaza futhi uyimfihlakalo. I-Leo Ascendant Impression: I-CharismaticLeos inamandla ngokwemvelo futhi iyakuthanda ukubonwa kulesi sibonakaliso njengomuntu ophakeme lapho-ke uzobonwa njengomuntu onekhono.
Uma ungena ekamelweni, phenya ikhanda, kuzwakala izwi lakho bese kuthathwa izeluleko zakho, labo ohlangane nabo nje bangahle bangavumelani. Lokhu konke kuzwakala kukuhle impela, kepha kunokubheduka, izinyuka zikaLeo nazo zivame ukubonwa njengezikhulu kakhulu. I-Virgo AscendantImpression: PoisedAs a Virgo Ascendant, ungahle uhlaziye futhi ube namasu.
Ukuxazulula inkinga akuyona inkinga yakho futhi uzokwazi ukwenza izinto zihambe lapho izinto seziba nzima. Ngakho-ke, unokwethenjelwa futhi kungalindelwa ukuthi wenze umsebenzi wenziwe. Kukaningi kunezikhathi lapho uhlaziya izinto ngokweqile futhi ubhekwe njengogxeka ngokweqile.
Lo mbono uvame ukugcina abantu bekude nawe futhi ushiya abangane abambalwa eceleni kwakho. Ngokungafani nabakhuphuka eGemini, nabo abalawulwa yiMercury, abenyuka ngeVirgo bavame ukubonwa njengabangalindelekile futhi abangaxakile. I-Libra AscendantImpression: CharmingUke wake wakuthola ukuncoma ngokuba muhle? Uma impendulo yakho inguyebo, umuntu okhuphukela kuye kungenzeka ukuthi uLibra.
Lesi sibonakaliso esilawulwa yiVenus asihlali sibukeka kahle njengeTaurus, kepha nakanjani sithola ubuhle. Uma uzalwa nalesi sibonakaliso sezodiac ascendant lapho-ke ungaba ngumuntu onekhono ekuxazululeni izingxabano. Bayakugwema zonke izinhlobo zezinxushunxushu nokulwa ngakho-ke bathanda ukuhlala bodwa.
Abanye bangakuthola ukhululekile kakhulu ngezinye izikhathi. Babona ukungazimiseli kwakho ukwenza izehlakalo njengobuthakathaka bese bezama ukusizakala ngazo. I-Scorpio AscendantImpression: I-SexyUma uke wazibona izindatshana zethu ze-zodiac phambilini, akufanele kusimangaze ukuthi iScorpio isibonakaliso esivame ukusetshenziswa kakhulu kwezocansi, ukufa nokuzalwa kabusha.
Uma leso sibonakaliso se-zodiac singamandla akho, mhlawumbe unabathandi abaningi kunalokho ongakubala. Ama-ascendants alesi sibonakaliso se-zodiac avame ukubhekwa njengamandla ngendlela ecashile futhi ezolile. Abantu bavame ukukubona njengomuntu okwazi ukuphatha amagama futhi onekhono lokukhohlisa abanye ngokuthanda kwakhe.
Lapho sebekwazi kangcono, bazobona ukuthi ungaba umuntu ongcono kunalokho ababecabanga ekuqaleni. Uzokuthola kulula ukuthola ukunakwa ngisho noma ungafuni. Noma ungazi, abantu bazokuthola ungenakuphikiswa.
I-Sagittarius Ascendant Impression: I-Free Spirit Ungaba ngumuntu obheke nje ukufunda izincwadi, uhlale unolwazi ngezenzakalo zakamuva, futhi uhambe wedwa uma unesikhathi, kodwa abanye bangase bangakuboni ngaleyo ndlela. I-Sagittarius ascendant ine-Jupiter ekhaya labo lokuqala, futhi abantu bavame ukukubona njengomoya okhululekile. Bazocabanga ukuthi ukhuluma ngokukhululeka futhi uyaxoxa nabantu.
Uzodonseleka emisebenzini emangazayo, kanti ngenkathi ukujabulela ukuhamba ngesikhathi sakho samahhala, abanye bazokubona njengengxenye yobuntu bakho. Ezingqondweni zabo, isithombe sakho ngesika-Indiana Jones, uTintin, uLara Croft, noma uKattiss Everdeen. I-Capricorn AscendantImpression: I-Capricorn enqunyiwe ivame ukuzimisela, ukuthembeka, kanye nabantu abathanda imigomo.
Ukukhuphuka kwamaCapricorn kubonakala kubucayi futhi kugxile. Yize lokhu kungaba kuhle, ngokomsebenzi, futhi kube kuhle ezifundweni, kungaba yinkinga empilweni yabo yansuku zonke yezenhlalo. Uma benza ihlaya, abantu bangahle bangakuqondi futhi bacabange ukuthi babalulekile, futhi kwesinye isikhathi bangabekwa ukubukeka okuSabekayo.
I-Aquarius AscendantImpression: I-EclecticUma une-Aquarius edlubulundayo njengomuntu okhuphukayo, uzobonwa njengonembeza bezenhlalo. Abantu bavame ukukhuluma ngobuhlakani bakho nobuhlakani bakho ngenkathi becabanga ukuthi ungumuntu odansela isigqi sesigqi sabo; imibono yakho iyiqiniso futhi uthanda ukuzethula ngendlela e-ome njengeqanda. Unomusa futhi umuhle futhi lezi zimfanelo zizokusiza emibuthanweni yakho yokuxhumana nomphakathi.
O, futhi ngokusho kwababhula ngezinkanyezi abaningi, lo kwakungu-Ascendant kaNikola Tesla. Kuyathakazelisa, awucabangi? I-Pisces AscendantImpression: Enigmatic Ruled by Neptune, lesi sibonakaliso kuvame ukubizwa ngaso njengesibonakaliso esidala kunazo zonke se-zodiac. Abomdabu bale Ascendant bangavela njengemiphefumulo emidala.
Ama-Pisces Ascendants ngokuvamile athinta imizwa kakhulu futhi angaba yifilosofi encane kwesinye isikhathi. Umbono wabo unemibono futhi awusebenzi kancane. Kungakho abantu abanalesi ascendant bavame ukulahleka emicabangweni yabo.
Futhi, ubuntu bakhe buhlala buyimfihlakalo, lowo mqondo kunzima ukuwuqonda. Ngakho-ke ukube benginama-Aries kusibonakaliso sami esinyukayo bengizobhekwa njengonamandla noma ngingeyona. Hewu! Mhlawumbe yingakho ungafanele wahlulele incwadi ngekhava yayo.
Manje siyini isibonakaliso sakho esikhulayo? Ngabe ucabanga ukuthi izimpawu ze-zodiac zibalulekile? Sazise kumazwana angezansi, singathanda ukuzwa kuwe.
Afa kanjani amaLibra amaningi?
Libra, uzohlangana nomlingani wakho eneminyaka enguamashumi amabili, lapho usacabanga impilo futhi udidekile ngekusasa. Isithandwa sakho somphefumulo sizoba ngabantu abangakusiza wenze izinqumo ezinkulu empilweni. Bazoba umuntu ozizwa ukhululekile kakhulu uma unaye.22. 2021.
Ushonile. Kubi kakhulu. Ngeshwa, awukakulungeli ukuqhubekela phambili okwamanje, ngakho-ke unquma ukuhlala isikhashana bese unaka umzimba wakho wenyama ngezimfihlo zasekhaya lomngcwabo ongafuni ukuzazi! Njengoba umncane impela futhi nokufa kwakho bekungalindelekile, uzodinga ukuhlolwa kwesidumbu.
Yingakho uzithola noma kunalokho umzimba wakho ugcinwe ngokuphephile efrijini emakhazeni egumbini elingaphansi kwesibhedlela sangakini.
Ubuka ngentshisekelo njengoba udokotela ekhipha umzimba wakho efrijini awulungiselele ukuhlolwa kwesidumbu. Uqala ngokuhlolwa kwangaphandle bese ubheka noma yiziphi izimpawu ezisobala zokulimala noma ukunakekelwa kwezokwelapha kwakamuva bese ubhala phansi noma yiziphi izimpawu zokukhomba ezinjengamabala akho namathambo akho. Udokotela ufaka isifihla-buso esibukeka ngendlela eyinqaba ukuqala ukuhlolwa kwangaphakathi, okuthola kancane ngaphezulu uze ufike esakeni.
Udokotela uzosebenzisa isaha ukusika isisu sakho uvuleke, kusuka ethanjeni le-pubic kuze kufike ku-sternum yakho, futhi usike izimbambo zakho ukuveza umgudu wesifuba sakho. Okungenani, bayaqaphela ukuthi bangagawuli kakhulu ukuze abathandekayo kungadingeki babone ubufakazi besidumbu ngesikhathi somngcwabo wakho. Ungayeki ukubuka udokotela ekhipha izitho zakho ngakunye ukuze azihlole ngamunye ngamunye.
Uzosebenza ngamabhulokhi amathathu, uqale ngendawo yesifuba. Okokuqala, basusa amaphaphu akho nenhliziyo, bese bekhulula isikhumba siye esilevini sakho ukuze sifike olimini nasemphinjeni ngaphandle kokushiya izimpawu ezibonakalayo. Umh, ngiyabonga, ngicabanga ...
Okulandelayo, basusa isibindi sakho, amanyikwe, isisu nezinso, futhi ekugcineni, bakhipha izinso, isinye, amathumbu nezitho zakho zokuzala. Manje umzimba wakho uyimbobo engenalutho, udokotela uphendulela ukunakekela ezithweni zakho futhi azihlole ngamunye ngamunye. Kodwa-ke, unenkinga yokunaka okwenzekayo ebhentshini lapho umzimba wakho ulele lapho ungenalutho ...
Udokotela akatholi monakalo osobala kunoma yiziphi izitho zakho zomzimba, ngakho-ke uthatha amasampula ukuwaletha ukuze ahlaziywe kufaka phakathi ukuhlolwa kwe-toxicological. Ngemuva kokuthi amasampula elungisiwe, udokotela uzoqondisa ngokucophelela izitho zakho emzimbeni wakho, cishe lapho zikhona, abese ethunga ngokucophelela okusikekile. Umangele kancane ukubona ukuthi baphinde bahlanze umzimba wakho ukuze basuse noma yibuphi ubufakazi bokubulawa kwesidumbu, futhi bakugezele nezinwele! Ekugcineni, udokotela uqeda umbiko wakhe bese edlulisela umzimba wakho ekhaya labangcwabi.
Abahlengikazi ababili beza bezothutha umzimba wakho bawuyise emngcwabeni, balayishe umzimba wakho ku-stretcher bese bepakisha izingubo zakho nemiphumela yakho. Ukhululekile ukuthi isikhwama semali sakho senza singathintwa ephaketheni nezimpahla zakho, kodwa-ke 'He!' Kusho enye yezisebenzi. “Lo mfana unephasethi egcwele kamasipala ephaketheni lakhe! Lokho kufanele kubize okungenani ama-dollar angamashumi amahlanu.
Ngizokugcina lokhu - akufani nokuthi uzokukhumbula! Laba bobabili bayayihleka njengoba begingqa umzimba nezimpahla zakho emotweni yezidumbu elindile. Uma uhamba kahle, ulandela umzimba wakho uye ekhaya lomngcwabo futhi uzungeze elinye ifriji. Ubani owayengacabanga ukuthi ukufa kumnandi kangaka! Kufanele wenze kangcono - leli yikhaya lakho kuze kube imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu ingenile.
Ukufa kungabhaliswa futhi ukugqumisa kwakho kungaqala ...
Isikhashana nje - ungaqiniseki uma kungamahora noma izinsuku, isikhathi siyamangaza uma usufile - umzimba wakho ukhishwa efrijini futhi bese ufakwa etafuleni egumbini lokugcoba lomuzi womngcwabo. Umphathi womngcwabo ufika nomuntu ogqumisa isidumbu bese exoxa ngamalungiselelo omngcwabo wakho. “Uhambo lomphakathi lusezinsukwini ezimbili, ngakho-ke kudingeka senze umuthi ngesikhathi sokuvakasha komndeni wangasese kusasa kusihlwa,” kusho umqondisi womngcwabo. “Akunankinga,” kusho isidumbu. “Ubatshele yini ukuthi ukugqumisa akufuneki ngempela, ikakhulukazi? Ngingamfaka eqhweni kuze kufike lapho ngibuka khona bese ngifaka isudi lepulasitiki ngaphansi kwezingubo zakhe ukuyivimba ukuthi ingasuki.
Kushibhile, ikakhulukazi uma uzoya ukuyoshisa isidumbu sakhe… ”“ Impela ngeke! ”Kusho umngcwabi. 'Angazi - lokho kungasilimaza!' Bahleke bobabili njengoba ubuka ngolaka. Njengoba kungekho okuningi ongakwenza ngakho, uyisipoki, ekugcineni uzinze phansi ukuze ubuke inqubo yokugqumisa.
Futhi awuyithandanga imisindo yokuthi 'seeping away'.
Okokuqala, umgqosi wezidumbu uzowqaqa umzimba wakho bese uwuhlanza kahle ngomuthi wokubulala amagciwane. I-Rigor mortis isingenile futhi yenza yonke imilenze yakho iqine futhi kube nzima ukuyisebenzela, ngakho-ke chitha isikhathi esithile ubhucunga isitho sakho sokuzivocavoca umzimba. Ngemuva kwalokho benza ukusikeka okuncane emgodini wakho bese begcwalisa umzimba wakho nge-formaldehyde futhi bayashaqeka lapho bebona umzimba wakho uqala ukukhuluphala bese uthola umbala omningi - empeleni ubukeka ufana nempilo.
Ngokulandelayo, umuntu ogqumisa isidumbu usika futhi, kulokhu ngaphansi kwezimbambo zakho, bese efaka ithuluzi lokuncela lensimbi elibizwa ngokuthi i-trochar ohlelweni lokumpompa esifubeni sakho. Babuke ngokwethuka njengoba bevula umnyango. sebenzisa i-Ochar ukubhoboza nokukhipha uketshezi emzimbeni wakho ngamunye - kufaka phakathi isinye sakho kanye nesisu sakho.
Yebo! Ngenhlanhla, umgqoki ugqoka amagilavu ​​nesifihla-buso, kanti uhlelo lokudonsa alunomoya ngakho-ke akukho ketshezi oluthintana nalo. Uma umzimba wakho usuthululwe ngokuphelele, okokugqumisa kuzowugcwalisa ngelitha liketshezi, elizogcwalisa izitho zakho futhi lithambise iphunga elibi. Manje njengoba ukugqumisa kuqediwe, sekuyisikhathi sokulungiselela umzimba wakho ukucabangisisa kwakho.
Unenkinga yokubuka abagcotshiweyo befaka ikhala nomphimbo wakho ngokotini ukugcina iphunga noma uketshezi kungaphumi, kepha ukuzibuka zomisa izinhlamvu zamehlo akho kubi kakhulu! Kodwa-ke, lesi yisinyathelo esibalulekile futhi uma sishiyiwe singadala uketshezi ukuphuma emehlweni akho. okungabukeka njengezinyembezi emndenini wakho osabekayo! Uma usomile, izigqoko zepulasitiki ezimise okweqanda ziyabekwa ngaphansi kwamajwabu amehlo akho ukuze zingagudluki kugebhezi lwakho, nezinkophe zakho ziqoshwa zivaliwe, kodwa ukuthotshiswa kokugcina kuza lapho zilungela ukuvala umzimba wakho Ngemuva kokuhlanzwa ngokuphelele, kukudumaze , into yokuqala abayigqokayo inabukeni lomuntu omdala! Lokhu kwenzelwa ukuvikela ibhokisi nezingubo zakho - ingasaphathwa eyabantu obathandayo - kunoma yikuphi ukuvuza, kodwa lokho akukwenzi kube lula ukubukwa! Okokugcina, izinwele zakho zifakwa isitayela, izinwele emakhaleni nasezindlebeni zigundiwe, ukwakheka okulula kuyasetshenziswa, futhi umzimba wakho uthanjiswe ngomuthi wokugcina! gqoka isudi yakho enhle futhi kufanele uvume ukuthi ubukeka umuhle kumfana ofile! ngemuva kokuba umgqumisi esehambile, izisebenzi ezimbili zingena egumbini zigingqa ibhokisi ebhodini lasesibhedlela - uyibhasi elinyonyobayo - Dlula isela - kodwa awumazi omunye.
Kubukeka kukungakhululeki ukusondela emzimbeni wakho, ngakho-ke uphetha ngokuthi kufanele kube okusha. Izinsolo zakhe ziyaqinisekiswa emizuzwini embalwa kamuva lapho iBhasi Pass Thief inqekuzisa ikhanda ebhokisini bese ithi, 'Kulungile newbie, vula isembozo ukuze sikwazi ukulayisha le moto.' I-newbie isondela ebhokisini lakho lomngcwabo futhi iligcina ngaso sonke isikhathi ibeke iso emzimbeni wakho ngokungathi uhhafu ulindele ukuthi uhlale noma yimuphi umzuzu.
Lapho elula isandla sokuvula ibhokisi, isivalo siyandiza bese umzimba uyasukuma ufike kuye. Uphuma egumbini ememeza ukubulawa kukaNkulunkulu futhi uthola umuzwa wokuthi akabuyi. “Ngabe umbonile egijima! Yeka ukwesaba! ”Kusho indoda ehleli ebhokisini lakho lomngcwabo, manje osumbona njengomunye umhlengikazi ovela esibhedlela. “Ngangazi ukuthi akawulungele lo msebenzi.
Sinda ngokushesha, ”kusho omunye. 'Kulungile, phuma uzongisiza naye' Ekugcineni, bakubeka ngokucophelela ebhokisini lakho bese bekukhiphela egumbini lokuvakasha. Unensizakalo enhle egcwele umndeni nabangane futhi uyajabula ukubona ukuthi kubukeka sengathi bagcwalisa okuthile.
Kepha awukakulungeli ukudlulela phambili. Uzwile amahemuhemu amabi ngokwenzekile e-crematoria, ngakho-ke hlala nomzimba wakho isikhashana uzibonele. Ngemuva kokunye ukugibela imoto yezidumbu, ibhokisi lakho lifika endaweni okushiswa kuyo izidumbu Umsebenzi osebenza lapho kushiswa izidumbu uthatha ikhadi elinenombolo ebhokisini lakho alibeke ebhodini eliseduze kwesitofu esikhulu.
Bathola ukuthi ngale ndlela uyazi ukuthi izinsalela zabo ziphuma ngakolunye uhlangothi. Opharetha uvula ibhokisi futhi ahlole umzimba wakho, umbona eqaphela iwashi lakho bese engena ku h. ubuka i-orror njengoba esondela kuye futhi emsusa emzimbeni wakho! “Kukangaki ngivame ukutshela lezi zidumbu ezisemngcwabeni ukuthi zikhumule amawashi ngaphambi kokuzinikela! Awazi yini ukuthi amabhethri amawashi ku-cremator angaqhuma? ! ”Uzizwa ungconywana, kepha uzimisele ngokugcina iwashi lakho kusukela manje kuqhubeke.
Hhayi ukuthi kuningi ongakwenza ngakho ...
U-opharetha uqala umshisi ngokushisa igesi nokushisa ikamelo ukuze lishise ngama-degree Celsius angamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu. Njengoba uqapha ikhompyutha ohlelweni, ubona isikrini esigcwele ukufundwa kwamazinga okushisa, ukukhishwa, namazinga womoya-mpilo, kodwa akusho lutho kuwe. Bayazi ukuthi lokhu kumele kube inqubo eyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho obukucabanga, ngaphambi kokuthi wazi ukuthi umthumeli womlilo uselungile, le yingxenye obukhathazekile ngayo - uzwile izindaba zabaphathi bomngcwabo abantshontsha futhi bethengisa kabusha amabhokisi! Kodwa ukwesaba kwakho kuyancipha ngokushesha lapho uzwa opharetha ekhuluma nomsizi wakhe njengoba belayisha umzimba wakho - imigqomo t kanye nakho konke - kuhhavini: 'Ngiyajabula ukuthi umndeni walomfana awuzange ukhombe ebhokisini lomngcwabo.' ngathola elinye lalawo makhadibhodi, ”kusho bona. “Lezi zinto azisebenzi kahle.
Izinkuni ezisuka ebhokisini zivutha kuqala, ezisiza ukudala indawo ephelele yokushisa neyomlilo ukuze kusetshenziswe kahle futhi kushise izidumbu. '' Ngakho-ke, 'bavala umnyango womuntu oshonile. “Leyo bekuyinto encane enhle, ngakho ake sithathe ihora noma ngaphezulu. “Ngemuva kwehora, opharetha uyabuya ezohlola inqubekela phambili.
Balunguza ngewindi eceleni kwegumbi bese bememezela ukuthi inqubo yokushiswa isidumbu isiqediwe. Awukwazi ukumelana nokuzibheka, kepha okubonayo yinqwaba yomlotha kuphela. Opharetha uyavala umshini bese eshiya umsizi wakhe emsebenzini ongenakulinganiswa wokukhipha izinsalela.
Lapho nje umshini usupholile, umsizi uphusha izinsalela ngensimbi engamamitha amahlanu ubude ngembobo esitezi sendawo yokushisela izidumbu nasesitsheni ukuze zipholise. Ekugcineni umsizi p Usesha isitsha esinezinsalela ezifrijini futhi asuse noma yiziphi izingxenye zensimbi ezazisele ebhokisini. Lapho eseqedile uzobona ukuthi kusenezicucu ezinkulu emhlanganweni futhi uzokhathazeka ukuthi uphuthelwe amahenjisi noma izikulufu.
Buyela uyohlola izinsalela. 'Umsebenzi omuhle ngicabanga ukuthi unakho konke. Kubukeka sengathi sinezicucu zamathambo, mhlawumbe ucezu lwethambo le-hip noma le-shin.
Lokho kungalindelwa - amathambo amakhulu awahlali ephuka ngokufanayo, futhi la mathambo amancane ekugcineni aqina. Ungakhathazeki, isidumbu sizokunakekela. ”Awunaso nesikhathi sokubhalisa lezi zindaba ezimbi lapho umsizi eletha udoti ngamathambo akho endaweni yokushisela izidumbu. ugaya ngisho umlotha bese uhlunga izingcezu ezinkulu ezingabukeki.
Lapho isidumbu sesiwenzile umsebenzi waso, izinsalela zakho zizodluliselwa emhidweni omuhle wokuhlobisa okhethwe yizihlobo zakho, bese ubeka u-d uzolandwa egumbini eligcinwayo. Ukhululekile lapho ubona ukuthi iwashi lakho liseduze nomchamo wakho - okungenani awulahlekile! Wanelisekile ngokuthi umzimba wakho uphathwe kahle futhi ngenhlonipho, ekugcineni unquma ukuthi sekuyisikhathi sokuhamba bese uvumela sonke isikhathi ukuthi sihlole lokho olunye uhlangothi olunikela ngakho. Umphefumulo wakho usunokuthula manje njengoba wafunda ngezimfihlo zasekhaya lomngcwabo ongafuni ukuzazi! Manje ucabangani ngalezi zimfihlo zomngcwabo? awufuni wazi? Yini emangaze kakhulu ngokulungiselela isidumbu umngcwabo? Qiniseka futhi usazise imicabango yakho ngezimfihlo zasekhaya lomngcwabo kumazwana abekiwe! Kunalokho hlola le ndatshana enesihloko esithi Kwenzekani Ngaphambi Kokufa Kwakho? Kuzokwenza izimfihlo zekhaza lomngcwabo zibukeke njengezincane kakhulu ezinkathazweni zakho! Noma mhlawumbe ukhetha le enye i-athikili esikhundleni.
Kunoma ikuphi, chofoza eyodwa manje uma nje usengaphila!
Ngubani umphefumulo kaLibra?
IGemini yinhleumphefumulongobaILibrangoba izogcinaILibraukubungaza futhi ngeke kuphele ukufuna ukubazi. Bayamangala ngobudlelwano. Futhi akuyona inkinga yamakhemikhali kulaba bobabili ngoba izinhlansi zizondiza lapho kuxhuma ngokomoya futhi kuxhumana.6. 2020.
Ngabe amaLibra alungile ngemali?
ILibra ivame ukuphana kakhulu, kephaukuphana kwabo kuvela ekufuneni ukuthandwa ngabantu. Bazama ukugcina umkhondo wemali yabo, kodwa izinto zihlala zivela futhi bagcina besebenzisa. Zihlala ziphukile njalo ekupheleni kwenyanga ngayinye. Kepha kuyabathokozisa lapho bengasiza othile noma benze okuthile ukuzijabulisa.6. 2021.
Isiphi isibonakaliso somphefumulo weLibra?
Ngabe amaLibra athandana ngokushesha?
Noma kunjalo, kubalulekile ukuqaphela lokhoAmaLibra ayathandanakanzima futhi ngokushesha kodwa ungalahlekelwa inzalo njengoba njengokushesha. Kungenzeka kungasheshe njenge-Aries noma iGemini, kepha kuzofanele uthole izindlela zokugcina inhlansi ebudlelwaneni bakho iqhubeka. Isibonelo, uLang uthiuthandoukuhlanganyela impilo yomphakathi nomlingani wabo.amashumi amabili. 2021.
Ngubani uLibras soulmate?
IGemini ngumdlalo omuhle weILibra. IGemini yinhleumphefumulongobaILibrangoba izogcinaILibraukubungaza futhi ngeke kuphele ukufuna ukubazi. Bayamangala ngobudlelwano.6. 2020.
Ngabe u-2021 unyaka omuhle weLibras?
ILibraizinkanyezi2020ubikezela ukuthi impilo yakho izoba lula kunokujwayelekile lokhuunyaka. Uzoba nezibopho ezimbalwa nesikhathi esithe xaxa sokwenza izinto ofuna ukuzenza. Ukusebenza ezintweni ozithandayo kuzokulethela injabulo enkulu lokhuunyaka.2020kuyintounyaka omuhleukugxila kuwe nakubudlelwano bakho.
Ingabe iLanga liseLibra ngo-Okthoba 13?
Okthoba 13 Zodiac yiLibra - Ubuntu Bokugcwele be-Horoscope. Lesi yisimboli sabantu abazalwa phakathi kukaSepthemba 23 no-Okthoba 22 lapho iLanga lithathwa njengeLibra. ILibra Constellation enezindawo ezibonakala phakathi kuka- + 65 ° kuya -90 ° futhi ayinazo izinkanyezi zokuqala, ingenye yezinkanyezi eziyishumi nambili zezinkanyezi.
Okthoba 13 Zodiac yiLibra - Ubuntu Bokugcwele be-Horoscope. NjengoLibra owazalwa ngo-Okthoba 13, uyalalelisisa futhi ubaliwe kepha futhi uzovumela imizwa yakho ibuse idlule ingqondo yakho kwesinye isikhathi. Ukunethezeka ngezinketho zakho zempilo, awubeki ukumelana okukhulu nokushintsha kepha ungabekezelela lapho abantu bethatha izinqumo egameni lakho.
Ngabe i-Aug 23 horoscope ibukeka kanjani ngeLibra?
Aug 23. Lesi sikhathi sizokunikeza inani elikhulu lamandla okudala kanye namakhono aholayo. Ngeke kube yinkinga kuwe ukuthatha umthwalo omningi, ube ngumholi noma unikeze ama-oda. Uzozizwa kahle kakhulu kulesi sikhundla futhi uzobukeka ufana nakwabanye. Ungase futhi uzizwe udinga ingcebo, kokubili ngokwezinto ezibonakalayo nangokomoya.